कम्युनिष्ट सरकारले लोकतन्त्र धरापमा पा¥यो : डा. शेखर कोईराला::Nepal's News Portal
वालिङ : नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोईरालाले लोकतन्त्रको रक्षार्थ नेपाली काँग्रेस एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभएको छ । स्याङ्जाको फेँदिखोला गाउँपालिका कार्यसमितिको भेटघाटमा बोल्दै डा. कोईरालाले लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्न कागे्रसलाई जिवित राख्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
डा. कोईरालाले भन्नुभयो, “दुई तिहाईको कम्युनष्टि सरकारले लोकतन्त्रलाई धरापमा पारेको छ । लोकतन्त्रको रक्षाका लागी कार्यकर्ता आन्दोलनका लागी तयार रहनुस् ।” सरकार लोकतन्त्र विरोधी गतिविधिहरुमै लागिरहेको भन्दै नेता कोईरालाले लोकतन्त्रको पहेदारको रुपमा कागे्रस उभिने चेतावनी दिनुभयो ।
सरकारले सबै अधिकार केन्द्रिकृत गरेको आरोप लगाउँदै सरकार दुई तिहाईको दम्भमा संविधान विरोधी कार्यहरु गरिरहेको डा. कोईरालाको भनाई छ । यसैबीच भोली सोमबार डा. कोईरालाले वालिङमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्य समिति स्याङ्जाको आयोजनामा महामानव विश्वेश्वरप्रसाद कोईरालाको ३७औँ स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा डा. कोईरालाले सम्बोधन गर्नुहुनेछ ।